Fails – Mega Quiz
မူးပြီးအိမ်ပြန်လာရင် ဒုက္ခရောက်သွားစေနိုင်တဲ့ လှေကားများ – ဓာတ်ပုံ(၂၅)ပုံ
အိမ်တစ်အိမ်ကိုအလှဆင်ဖို့ လှေကားဟာလည်း တစ်တောင့်တစ်နေရာက ပါဝင်တဲ့အတွက် ဗိသုကာပညာရှင်များဟာလည်း လှပပြီးအများနဲ့မတူတဲ့ ပုံစံဒီဇိုင်းများကို ရေးဆွဲလာကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း တချို့လှေကားဒီဇိုင်းများကတော့ လှပပြီးဆန်းသစ်နေပေမယ့် အန္တရာယ်လည်းရှိနေပြန်ပါတယ်။ ယခုတစ်ခေါက်မှာတော့ အန္တရာယ်ရှိတဲ့လှေကားများရဲ့ ဓာတ်ပုံများကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ မိတ်ဆွေတို့လည်းဓာတ်ပုံများကိုကြည့်ပြီးတော့ ဘယ်လှေကားက အန္တရာယ်အရှိဆုံးဖြစ်မလဲဆိုတာ ကော်မန့်မှာ ပြောပေးသွားခဲ့ပါဦး။ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.
Stay Home ကာလ အိမ်မှာဆံပင်ညှပ်ရင်း အလွဲများနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ကြသူများ – (၂၅)ပုံ
ကမ္ဘာကြီးဟာကပ်ရောဂါကြောင့် နိုင်ငံအတော်များများမှာ Stay Home အဖြစ်နဲ့နေခဲ့ကြရပြီး ဆံပင်ညှပ်ဆိုင်တွေလည်း ဖွင့်ခွင့်မရှိတာကြောင့် မိမိတို့အိမ်မှာပဲ ကိုယ်တိုင်ဆံပင်ညှပ်ခဲ့ကြရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မိမိတို့အိမ်က မိသားစုဝင်တွေက ဆံပင်ညှပ်တဲ့နေရာမှာ ကျွမ်းကျင်သူတွေတော့မဟုတ်ကြပါဘူး။ ဒါကြောင့်လည်း အိမ်ကလူတွေကို မိမိလိုချင်တဲ့ပုံစံ ညှပ်ခိုင်းတဲ့အခါ အလွှဲများနဲ့ကြုံရပါတော့တယ်။ အလားတူဖြစ်ရပ်မျိုး ကြုံတွေ့ခဲ့ကြသူများက လူမှုကွန်ယက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Twitter ပေါ်မှာဓာတ်ပုံတွေကို ပြန်လည်မျှဝေခဲ့ကြပါတယ်။ အောက်ဘက်မှာတော့ Stay Home ကာလမှာ အိမ်မှာဆံပင်ညှပ်ရင်း အလွဲများနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ကြသူများရဲ့ ဓာတ်ပုံတွေကို စုစည်းဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ၁။ ၂။ ၃။ ၄။ ၅။ ၆။ ၇။ ၈။ ၉။ ၁၀။ ၁၁။ ၁၂။ ၁၃။ ၁၄။ ၁၅။ ၁၆။ ၁၇။ ၁၈။ ၁၉။ ၂၀။ ၂၁။ ၂၂။ …
Stay Home ကာလ အိမ်မှာဆံပင်ညှပ်ရင်း အလွဲများနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ကြသူများ – (၂၅)ပုံ Read More »
သတ်မှတ်ထားတဲ့စည်းကမ်းတွေကို မလိုက်နာဘဲ နောက်ပြောင်ခဲ့ကြသူများ – (၂၅)ပုံ
ကမ္ဘာပေါ်က နေရာတိုင်းလိုလိုမှာ အစီအစဉ်တကျနဲ့ ချောမွေ့အဆင်ပြေနိုင်စေရန် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို သတ်မှတ်ထားလေ့ရှိကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း သတ်မှတ်ထားတဲ့စည်းကမ်းတွေကိုမှ ချိုးဖောက်ချင်ကြတဲ့ လူတွေရှိသလို သိသိရက်နဲ့ တမင်တကာရယ်စရာဖြစ်အောင် နောက်ပြောင်ကြတဲ့သူများလည်း ရှိကြပါတယ်။ ယခုတစ်ခေါက်မှာတော့ သတ်မှတ်ထားတဲ့စည်းကမ်းတွေကို မလိုက်နာဘဲ နောက်ပြောင်ခဲ့ကြသူများရဲ့ဓာတ်ပုံများကို စုစည်းဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ပုံတွေကိုတော့ ဟာသအမြင်ဖြင့်သာ ကြည့်ရှုပေးကြဖို့ မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါတယ်။ ၁။ အမျိုးသမီးများသာဖတ်ရန်ဆိုလို့ ကောက်ဖတ်လိုက်တဲ့အမျိုးသား ၂။ လူငယ်များအတွက်နေရာဆိုလို့ ကောက်ထိုင်လိုက်တဲ့ဦးလေးကြီး ၃။ ရှိသမျှစည်းကမ်း အကုန်ချိုးဖောက်တဲ့သူ ၄။ ဘောမကစားရ ဆိုလို့ ၅။ ၆။ လက်နှစ်ဖက်နဲ့ဆွဲပါဆိုလို့ လက်တစ်ဖက်တည်းနဲ့ ဆွဲလိုက်သူ ၇။ မာကာပြန်ပေးပါဆိုလို့ မပေးဘူးလို့ ပြန်ရေးထားသူ ၈။ ညာဘက်ကိုကြည့်ပါဆိုလို့ ဘယ်ဘက်ကိုကြည့်နေသူ ၉။ ဓားနဲ့ မဖောက်ရဆိုလို့ ၁၀။ တစ်နေ့တစ်လုံးသောက်ပါဆိုတာကို တစ်နေ့နှစ်လုံးသောက်ချင်နေသူ ၁၁။ စားပွဲပေါ်မှာ …
သတ်မှတ်ထားတဲ့စည်းကမ်းတွေကို မလိုက်နာဘဲ နောက်ပြောင်ခဲ့ကြသူများ – (၂၅)ပုံ Read More »
တစ်ခါတစ်ရံမှာ ဓာတ်ပုံတွေကိုအမှတ်တမဲ့ရိုက်လိုက်ပေမယ့် ထင်မှတ်မထားတဲ့အခြေအနေနဲ့ကြုံတွေ့ပြီး နောက်တစ်ခါပြန်ရိုက်ကူးဖို့ မဖြစ်နိုင်တော့တဲ့ အချိန်အခါမျိုးတွေရှိတတ်ပါတယ်။ ဥပမာ တစ်စုံတစ်ယောက်က Selfie ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးနေတဲ့အချိန် အနောက်ကခွေးလိုက်ကိုက်တာ ဒါမှမဟုတ် ရှိုးပွဲတစ်ခုမှာ ဓာတ်ပုံရိုက်နေတဲ့အချိန် လက်ထဲကဖျော်ရည်ခွက်မှောက်ကျသွားတာမျိုး အစရှိတဲ့ အမှတ်တရအဖြစ်အပျက်တွေလိုပေါ့။ အောက်ဘက်မှာတော့ ယခုလိုအဖြစ်အပျက်မျိုးကို ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဓာတ်ပုံအချို့ကို စုစည်းဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ၁။ ၂။ ၃။ ၄။ ၅။ ၆။ ၇။ ၈။ ၉။ ၁၀။ ၁၁။ ၁၂။ ၁၃။ ၁၄။ ၁၅။ ၁၆။ ၁၇။ ၁၈။ ၁၉။ ၂၀။ ၂၁။ ၂၂။ ၂၃။ ၂၄။ ၂၅။
Online Shop မှ မှာယူပြီး အလွဲများနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ကြသူများက ပြန်လည်မျှဝေထားကြသောဓာတ်ပုံများ – (၂၅)ပုံ
ယနေ့ခေတ်မှာတော့ အင်တာနက်အသုံးပြုသူတွေ များပြားလာမှုနှင့်အတူ အွန်လိုင်းပေါ်မှ စျေးဝယ်၊ ရောင်းခြင်း ဟာလည်း ပိုမိုများပြားလာလျက်ရှိပါတယ်။ ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါကြောင့် Stay Home လို အစီအမံတွေကြောင့်လည်း Online Shopping ဟာ ပိုမိုခေတ်စားလို့ လာခဲ့ပါတယ်။ သို့ပေမဲ့လည်း အွန်လိုင်းပေါ်မှ စျေးရောင်းချသူများဟာ ပစ္စည်းအရေအသွေးများနဲ့ စျေးနှုန်းများကို မှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ ရောင်းချကြသူများရှိကြသလို တခါတရံမှာ ကြော်ငြာတဲ့ပုံထဲက ပစ္စည်းတွေနဲ့မတူညီဘဲ ကွဲလွဲနေတဲ့အဖြစ်မျိုးလည်း ရှိတတ်ပါတယ်။ တခါတရံမှာလည်း စျေးဝယ်သူဖက်မှ မိမိနဲ့လိုက်ဖက်မယ်ထင်လို့ ဝယ်ယူပြီးမှ အလွဲများနဲ့ ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ ဖြစ်ရပ်မျိုးလည်း ရှိတတ်ပါတယ်။ ယခုတစ်ခေါက်မှာတော့ အွန်လိုင်းပေါ်မှ စျေးဝယ်ရင်း အလွဲများနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ကြသူများရဲ့ ဓာတ်ပုံများကို စုစည်းဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ၁။ ၂။ နဖူးပဲကပ်လို့ရတယ် ၃။ လေထိုးရေကန် ခြေထောက်ပဲထည့်လို့ရတယ် ၄။ ၅။ ၆။ ၇။ ၈။ ခြေထောက်တစ်ဖက်ပဲ ဝတ်လို့ရတယ် ၉။ ပေါင်ချိန်စက်မှာထားတာ …
Online Shop မှ မှာယူပြီး အလွဲများနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ကြသူများက ပြန်လည်မျှဝေထားကြသောဓာတ်ပုံများ – (၂၅)ပုံ Read More »
ကံမကောင်းတဲ့နေ့တစ်နေ့နဲ့ ကြုံတွေ့ခဲ့ကြသူများရဲ့အလွဲဓာတ်ပုံများ – (၂၅)ပုံ
တစ်ခုတည်းရှိတဲ့အလုပ်ကို တစ်ခါလုပ်ပြီး အလုပ်ပြုတ်သွားခဲ့ကြသူများ – (၂၅)ပုံ
တခါတရံမှာ အချို့သောသူတွေဟာ အလုပ်တစ်ခုတည်းရှိတာတောင် လွဲမှားအောင် လုပ်တတ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လူတိုင်းဟာ အမှားနဲ့ကင်းကြတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့်လည်း ကျွန်တော်တို့တွေဟာ အလုပ်တစ်ခု မလုပ်ခင်အချိန်မှာ ကြိုတင်စဥ်းစားရတွေ၊ အလုပ်ပြီးတာနဲ့ ပြန်လည်စစ်ဆေးရတာတွေ ပြုလုပ်ကြရပါတယ်။ သို့ပေမဲ့လည်း အလုပ်ကို စိတ်ပါလက်ပါနဲ့ ကြိုးကြိုးစားစားလုပ်တတ်တဲ့သူတွေ ရှိကြသလို အလုပ်ကို ပေါ့ပေါ့ဆဆနဲ့ ဖြစ်သလို လုပ်တတ်ကြတဲ့သူတွေလည်း ရှိကြပါတယ်။ အောက်ဘက်မှာတော့ အလုပ်ကို ပေါ့ပေါ့ဆဆနဲ့ ဖြစ်သလို ပြုလုပ်ခဲ့ကြသူများရဲ့ဓာတ်ပုံတွေကို စုစည်းဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ၁။ ၂။ ၃။ ၄။ ၅။ ၆။ ၇။ ၈။ ၉။ ၁၀။ ၁၁။ ၁၂။ ၁၃။ ၁၄။ ၁၅။ ၁၆။ ၁၇။ ၁၈။ ၁၉။ ၂၀။ ၂၁။ ၂၂။ …
တစ်ခုတည်းရှိတဲ့အလုပ်ကို တစ်ခါလုပ်ပြီး အလုပ်ပြုတ်သွားခဲ့ကြသူများ – (၂၅)ပုံ Read More »
နှေးကွေးတဲ့အင်တာနက်လိုင်းဆွဲအားနဲ့ အပ်ပလီကေးရှင်းစနစ်ချို့ယွင်းမှုတွေဟာ သင့်ကို ကံကောင်းဆိုးမှုတစ်ခုနဲ့ ကြုံတွေ့သွားစေနိုင်ပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ နိုဝင်ဘာ(၂၅)ရက်နေ့က ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာ အသက်ခုနနှစ်အရွယ်သာရှိသေးတဲ့ ကလေးမလေးတစ်ယောက်ဟာ အစားအသောက်တွေကို ဖုန်းအပ်ပလီကေးရှင်းကတစ်ဆင့် မှားယွင်းပြီးအော်ဒါမှာခဲ့မိတာကြောင့် food panda အစားအသောက်ပို့ဆောင်ရေးသမား(၄၂)ယောက်ခန့်ဟာ တစ်ပြိုင်နက်တည်း အိမ်ကိုရောက်ရှိလာတာကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအဖြစ်အပျက်ဟာ Dan Kayne Suarez ဆိုသူရဲ့ ဖေ့စ်ဘုတ်လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်တွင် တိုက်ရိုက်ရိုက်ကူးထုတ်လွှင့်ခဲ့မှုကြောင့် တနှင့်တပိုးကြောက်မက်ဖွယ် food panda ပို့ဆောင်ရေးသမားများစုဝေးပွဲကြီးအဖြစ် ပျံ့နှံသွားခဲ့ပါတယ်။ ထိုသူရဲ့အဆိုအရ က‌လေးမလေးဟာ မိဘနှစ်ပါးအလုပ်သွားနေချိန် သူမနဲ့ သူမရဲ့အဘွားအတွက် ကြက်ကြော်နှစ်ဘူးကို မှာယူဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့တာဖြစ်ပြီး သူမရဲ့မိဘတွေကလည်း သူမကို အပ်ပလီကေးရှင်းအသုံးပြုပုံကို သင်ကြားပေးခဲ့ဖူးတာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ကံမကောင်းစွာနဲ့ပဲ အလွန်နှေးတဲ့အင်တာနက်လိုင်းဆွဲအားကြောင့် အဆိုပါအပ်ပလီကေးရှင်းဟာ သူမရဲ့အော်ဒါမှာယူမှု၌ ချို့ယွင်းမှုတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ကြောင်း ထပ်တလဲလဲပြနေခဲ့ပါတယ်။ အကြိမ်လေးဆယ်ကျော်ကြိုးစား အော်ဒါမှာခဲ့ပြီးနောက်မှာ အောင်မြင်ခဲ့ပေမဲ့ ကလေးမလေး သတိမထားလိုက်မိတာက ရှေ့ကမှာယူခဲ့တဲ့အော်ဒါတွေလည်း အောင်မြင်သွားခဲ့တယ်ဆိုတာပါပဲ။ …
(၇)နှစ်သမီးလေး မှားယွင်းပြီးမှာလိုက်တဲ့အော်ဒါကို Delivery သမား(၄၂)ယောက် သွားရောက်ပို့ဆောင်ခဲ့ရသောဖြစ်ရပ် Read More »